Taom-piotazana lodsia : Miparitaka ny vola sandoka 10.000 ariary - ewa.mg
News - Taom-piotazana lodsia : Miparitaka ny vola sandoka 10.000 ariary
Miezaka mandamina sy mametraka ny fiarovana ireo mpitatitra sy ireo mpanangom-bokatra ary ireo mpandraharaha lodsia ny eo anivon’ny Emm-Reg amin’izao taom-piotazana sy fanondranana lodsia izao. Fotoana maha-be ny fihodinkodinan’ny vola mantsy ny vanim-potoana tahaka izao ka tsy kely làlana ny ratsy, saingy raha asan-jiolahy no mampanahy ny mpitandro ny filaminana dia fampiasana vola sandoka indray no misy manao amin’izao fotoana izao, tahaka ny tranga niseho tratran’ny zandary tao Mahavelona Foulpointe raha naharay fitarainana izy ireo. Raha ny fanazavana, dia nividy toy ireny mpanangom-bokatra mividy lodsia amin’ny tantsaha ireny ireo mpanangom-bokatra mampiasa ity vola sandoka ity, ary amin’ny takariva sy ny andro manomboka alina no tena fividianan’izy ireo ny vokatra lodsia. Ireo tantsaha tao Mahavelona Foulpointe sy manodidina ity kaominina ity ary ireo ilany avaratry Toamasina no tena nanapariahan’ireto mpanangom-bokatra, izao vola sandoka any aminy izao. Mpanangom-bokatra iray no tratra tao mahavelona Foulpointe ny alarobia teo, mbola sarona tany aminy ny ambin’ny vola sandoka nampiasainy manodidina ny am-polony tapitrisa ariary teo, raha efa naparitany tany ambanivohitra nividianany lodsia kosa ny sasany mitentina am-polony tapitrisa ariary ihany koa. Vola 10.000 ariary vaovao ireto vola sandoka misy manaparitaka amin’ny fividianana lodsia izao, ka nanaovan’ny Emmo-Reg antso ho an’ireo tantsaha ny tsy hanaiky maka vola mivantana intsony, fa tokony hampiasa ireny “Mobile Money” izy ireo hisorohana izao resaka vola sandoka izao. Anio zoma no hiakatra eo anivon’ny fitsarana eto Toamasina ny raharaha, raha ny zandary tao mahavelona Foulpointe no nanao ny fakana am-bavany ireto olona tratra ireto.
L’article Taom-piotazana lodsia : Miparitaka ny vola sandoka 10.00 ariary a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nitsoaka ny fonjan’Antanimora: jiolahy lavon’ny balan’ny zandary tany Anjozorobe
Taorian’ny fitsoahany nandritra ny roa volana ny fonjaben’Antanimora, maty voatifitry ny zandary tao amin’ny tanànan’Ambihinome, kaominina ambanivohitra Anjozorobe, ny lehilahy iray 26 taona, omaly…Mpanolana iray voasazy 12 taona higadra an-tranomaizina no nitsoaka ny zandary tany Ambihinome, distrikan’Anjozorobe omaly. Nandositra tao amin’ny fonjan’Antanimora tamin’ny 24 janoary teo ity jiolahy ity ary nifampitadiavan’ny mpitandro filaminana fatratra nandritra ny fotoana maromaro. “Efa nanao ny taratasy fampahafantarana ny fokontany manodidina sy mpitandro filaminana rehetra izahay”, hoy ny eo anivon’ny fonjan’Antanimora. Tra-tehaky ny Zandarimariam-pirenena tao anaty alan’Ambihinome, kaominina ambanivohitr’i Betatao, izy saingy tafaporitsaka. Vaky nitifitra ny zandary ka maty tsy tra-drano ilay voalaza fa olon-dratsy. Marihina fa maro ny heloka nanenjehana azy io ka isan’izany ny fanolanana zaza tsy ampy taona, nanomezana azy ny sazy 12 taona. Tsy vitan’izay, raindahiny amin’ny fanafihana mitam-piadiana tany an-toerana koa ny tenany.Tsiferana RandriatianaL’article Nitsoaka ny fonjan’Antanimora: jiolahy lavon’ny balan’ny zandary tany Anjozorobe a été récupéré chez Newsmada.
Hamehana: 130 000 t isan-taona ny trondro voajono tsy ara-dalàna
Mamolavola politika hitantana ny fari-dranomasina ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, mamaritra ny politika fitantanana hiarahan’ny minisitera isan-tsokajiny. Eo, ohatra, ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana sy ny jono miampy ireo minisitera maro hafa manana andraikitra goavana amin’io ranomasina io, tokony hanana fomba fijery mitovy amin’izay fepetra horaisina.Miainga amin’ny filàna ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ity drafitrasa hitantanana ny ranomasina ity ka ny minisitera tsirairay no manao ny lamina mifanandrify aminy, kendrena tsy hifanipaka izy rehetra fa manana fijery iombonana. Manohana izany ny Amerikanina amin’ny USAID, hiantohana ny mangarahara, antony nanampiany ity drafitrasa ity. Tsara ho fantatra fa manana morontsiraka 5 800 km isika. Sarotra ny ahazoana antontanisa azo antoka fa tombanana ho 100 000 – 130 000 t isan-taona tato anatin’ny 20 taona farany ny trondro voajono tsy ara-dalàna, ankoatra izay ripaka ny maro amin’ireo karazana zavaboahary anaty ranomasina.Tsy voaaro ny fari-dranomasinaRaha fehezina, tsy voaaro ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Misy ny minisiteran’ny Fiarovana, ny Tafika an-dranomasina nefa tsy ampy fitaovana na sambo. Ao ny misahana ny jono, saingy miovaova ny minisitera miandraikitra azy isaky ny miova fitondrana ka tsy hita marina izay tompon’andraikitra? Maro ny lalàna momba ny jono, saingy tsy voahaja amin’ny ankapobeny, tsy vitsy ireo sambo vahiny tafiditra eto tsy mahazo alalana. Eo koa ny minisiteran’ny Tontolo iainana, nefa voapoizina amin’ireo loto isan-karazany ny ranomasina, araraky ny sasany. Eo ny minisiteran’ny Fizahantany nefa tsy hita ny drafitrasa ho an’ny fizahantany mifandraika amin’ny ranomasina hatramin’izay.Noho izany rehetra izany, ny vahiny indray no marary manohana antsika tompony, holovain’ny taranaka rahampitso. R.MathieuL’article Hamehana: 130 000 t isan-taona ny trondro voajono tsy ara-dalàna a été récupéré chez Newsmada.
Fandaharana « Ambarao », radio Alliance 92 FM
Aiza ho aiza ny fifehezana ny fandriampahalemana sy ny filaminana an-tanàn-dehibe amin’izao fotoan’ny fihibohana izao? Ahoana indray ireny fihetsiky ny polisy tato ho ato amin’ny fanampiana olona etsy sy eroa ireny? Manao ahoana ny ady amin’ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna na ny fihoaram-pefy eo anivon’ny polisy? Anisan’ny ampahan’ny fanontaniana hovalin’ny tompon’andraikitry ny serasera, eo anivon’ny Polisim-pirenena, ny kaomisera Alexandre, izany amin’ny onjampeo Alliance 92 FM. Horenesintsika anio alarobia amin’ny 12 ora sy fahefany ny amin’ny fiteny malagasy (VM) ary amin’ny 1 ora latsaka fahatelony kosa ny amin’ny fiteny frantsay (VF).TaratraL’article Fandaharana « Ambarao », radio Alliance 92 FM a été récupéré chez Newsmada.